(L) မင်းမှာစွဲလမ်းမှုရှိလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ဤတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲဖြစ်စေအသုံးချနိုင်သည့်အနည်းငယ်ဘုံစွဲစမ်းသပ်မှုဖြစ်ကြသည်။ 2011 ခုနှစ်, စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM) အချို့သောလက္ခဏာသက်သေလက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ် constellation ထင်ဟပ်ဖော်ပြထားသည်။
ဆေးစွဲ - အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (DSM-IV)
အောက်ပါခုနစ်ခုမေးခွန်းများဟုတ်ကဲ့ဖြေပါသို့မဟုတ်လုံးဝမ။ လူတိုင်းစွဲများတွင်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပြုမူသောကွောငျ့အများစုမှာမေးခွန်းများကို, အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက် ပို. ရှိသည်။ သင်သာတစ်ဦးအပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ရေတွက်ဖို့ထိုမေးခွန်းကိုအဘို့အအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှဟုတ်ကဲ့ဖြေဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သည်းခံစိတ်။ သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအချိန် (တင်းမာမှု) ကျော်တိုးမြှင့်ခဲ့ဖူးပါသလား
ဆုတ်ခွာ။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါ, သင်သည်အစဉ်အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာကြုံတွေ့ကြသနည်း သငျသညျကိုအောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများမဆိုရှိခဲ့ရှိသည်: ယားယံခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ချွေး, ပျို့, ဒါမှမဟုတ်အန်ချောက်ချား?
အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ။ သငျသညျအနှုတ်လက္ခဏာသင့်ရဲ့ခံစားချက်မှအကျိုးဆက်များ, Self-လေးစားမှု, ကျန်းမာရေး, အလုပ်, သို့မဟုတ်မိသားစုတှေရှိခဲ့တယျသော်လည်းသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ရှိပါသလား?
လှုပ်ရှားမှုများလျစ်လျူရှုထားသို့မဟုတ်ရွှေ့ဆိုင်း။ သငျသညျအစဉျအမွဲဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုချွတ်ပယ်သို့မဟုတ်လူမှုရေး, အပန်းဖြေ, အလုပ်လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်စုလှုပ်ရှားမှုများပြီလော
သိသာထင်ရှားသောအချိန်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ဖြုန်း။ သငျသညျစီစဉ်သို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်, ဖုံးကွယ်, အသုံးပြု. ရယူအချိန်သိသိသာသာငွေပမာဏကိုသုံးစွဲရှိပါသလား? သင်အသုံးပြုနေတဲ့စဉ်းစားအချိန်အများကြီးဖြုန်းရှိပါသလား? သငျသညျအစဉျအမွဲဖုံးကွယ်သို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုမှုကိုလျော့ချပြီလော သငျသညျအစဉျအမွဲဖမ်းမိတဲ့ရှောင်ရှားရန်အစီအစဉ်များစဉ်းစားဖူးသလော
ခုတ်လှဲရန်အလိုဆန္ဒ။ သငျသညျတခါတရံခုတ်သို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်စဉ်းစားဖူးပါသလော သငျသညျအစဉျအမွဲခုတ်လှဲသို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်မအောင်မြင်ကြိုးစားမှုကိုဖန်ဆင်းပြီလော
သငျသညျဤမေးခွန်းများကိုအနည်းဆုံး3မှဟုတ်ပါဟုလျှောက်လျှင်, သငျသညျစွဲ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖြည့်ဆည်း။ ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (DSM-IV) နှင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (ICD-10) စံအပေါ်အခြေခံသည်။ (1)
နားလည်မှုစွဲဘို့တစ်ခုမှာရိုးရှင်းတဲ့မော်ဒယ်လေးယောက် CS လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်: